WFP oo ka hadashay Gaadiidkii u rarnaa oo ay Ciiddanka Kenya sheegeen in loo waday Alshabaab. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
WFP oo ka hadashay Gaadiidkii u rarnaa oo ay Ciiddanka Kenya sheegeen in loo waday Alshabaab.
Xiisad Xooggan ayaa waxay ka dhex aloosan tahay Dowladda Kenya iyo Hay’adda QM ugu qaabilsan Barnaamijka Cuntadda Adduunka ee WFP, kadib, markii ay Ciiddanka Ammaanka Kenya ku xayireen xuduudka gawaari u kireysan WFP oo cunto gargaar ah u waday Dadka ku dhibaataysan K/galbeed ee Somalia.
Afhayeenad-gobaleedka WFP u joogta magaalladda Nairobi, Challiss McDonoughoo la hadashay Wakaalladda Wararka ee REUTERS ayaa sheegtay inay Dowladda Kenya kala shaqeynayaan sidii loo xalin lahaa waxa ay ugu yeertay “Nasiib-xumidda Is-faham la’aanta” ka dhalatay Gaadiidka WFP ee lagu xayiray Xuduudka, loona diiday inay u gudbaan Xuduudka Somalia.
“Saddex Gaari ee Qandaraaska WFP haysta ayaa lagu joojiyey Mandera iyagoo watay dhamaan Waraaqihii ka yimid Dowladda Kenya ee Gaadiidkaasi lagu fasaxay inay u gudbaan Somalia” ayey tiri Afhayeenadda, oo intaasi ku dartay inay Hay’addu ilaalayn ku hayso sidii Shixnadaha Raashinka loo gaarsiin lahaa dadka tabaalaysan.
Waxay tilmaamtay inaysan Gaadiidkaasi u soconin Deegaanadda Alshabaab ay maamulaan, waxayna hoosta ka xariiqday inay Alshabaab sannadkii 2010-kii ka mamuuceen Hay’adda WFP inay ka hawlgasho Deegaanadda ay Alshabaab ka maamulaan Somalia.
Hadalkeeda ayaa u muuqday inuu jawaab-celin u yahay Wareysi Xiriiriyaha Gobalka W/bari Kenya, Ambassador Maxamuud Cali Saalax siiyey Wakaalladda Wararka ee REUTERS, taasi oo uu ku sheegay inay xayireen 3 gaari oo u rarnaa WFP, kadib, markii ay ka shakiyeen in Gargaarkaasi loo gudbiyo Alshabaabka ku sugan Degmadda Dolow-Somalia.
Waxa uu sheegay inay Xaqiijin ka sugayeen Hay’adda WFP Somalia, si aysan Cuntada gargaarka ugu dhicin Gacmaha Alshabaab, waa sida uu hadalka u dhigay.
Mas’uulkaasi waxa uu ku dooday in ay heleen Xog ku aadan in Xamuulkii hore ee ay Gaadiidka la xayiray ka gudbiyeen Xuduudka Somalia inay qaateen Alshabaab, waa sida uu hadalka u yiri.
Si kastaba ha ahaatee, Xayiraadda ay Maamulka W/bari Kenya ku hor-joogsadeen Gaadiidka u raran Hay’adda WFP ayaa waxay imaanaysaa iyadoo ay Kumanaan Kun oo Soomaali ah ku macluulsan yihiin Gobalka Gedo, gaar ahaan Dadkii ka barakacay Deegaanka Ceel-cadde oo ay Alshabaab iyo Ciiddanka Kenya ku dagaalameen bartamihii bishii hore ee Janaayo.
Maraakiibta Shisheeyaha ee isticmaala Badda Somalia oo loogu baaqay feejignaan dheeri ah.
Duuliye Vladimir Vodpopivec: “Waxaan u maleynayaa inuu Qarax ahaa wixii ka dhacay gudaha Diyaaradda Daallo Airlines…”